Dị ekike nke Germany | Akụkọ Njem
Dị ejiji ndị Germany
Anyị na-aga n'ihu na onye ọzọ nke ahụkarị ekike na ụwa. Uwe ndị ahụ na-echetakarị oge gara aga nke mmepeanya mebere ọdịbendị nke ha ma enweghị ọdịbendị dịka ụwa dị ugbu a. N'ihi ijikọ ụwa ọnụ a, enwetaghachiri nkọwapụta na uwe ndị si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa, na nke a si Germany.
Germany nwere ezigbo omenala Dị ka ọ dị na wetali, anyị na-ahụkwa uwe ndị sitere n'ike mmụọ nsọ site n'oge gara aga, dị ka oge ochie. N'ihe banyere Germany, ejiji ndị a na-ahụkarị bụ ndị a na-achọ mma site na ịchọ mma nke ime ime obodo, ebe a na-enye uwe kachasị mma.
1 Uwe a na-ahụkarị maka ụmụ nwanyị
2 Dị ụdị ndị nwoke
4 Ejiji achicha maka umuaka
5 Uwe ejiji na Oktoberfest
Uwe a na-ahụkarị maka ụmụ nwanyị
El A na-akpọ uwe ndị nwanyị na Germany Dirndl, Uwe ejiji nke puru na narị afọ nke iri na itoolu n'ime ime obodo. Uwe ndị a dịkarịsịrị njọ mana malite n'afọ 1870 bourgeoisie bidoro iji ha, yabụ, ha ghọrọ akwa ndị ama ama, nwekwaa akwa uwe mwụda mara mma. Elu atụmatụ bodice na corset. Dị ka ọ na-adị, anyị na-ahụ uwe elu nwanyị na-acha ọcha, ọ bụ ezie na n'oge ahụ, a na-etekwa ya uwe ndị a na-acha odo odo, nke mere ka ụda dị nro n'oge ọkọchị na ọchịchịrị n'oge oyi, na-eji ụda olu. N'aka nke ọzọ, o nwere uwe mwụda ogologo si malite. Taa, anyị nwere ike ịhụ uwe mwụda a nwere mkpụmkpụ dị iche iche, dabere na otu onye chọrọ iyi ya, site na sket dị n'okpuru ikpere ruo ndị dị mkpụmkpụ. Ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị chọrọ ime uwe na-ahụkarị, uwe mwụda a ga-adị ogologo na nkwonkwo ụkwụ.
Women'smụ nwanyị ndị a Ha na-eyiri uwe mkpuchi, nke enwere ike ịtinye aka na ebe dị iche iche. Buru n'uche na ọdịnala eriri nwere ụfọdụ ihe ọ pụtara. Ọ bụrụ na eyi ya n’etiti ọ pụtara na nwanyị ahụ amaghị nwoke, ọ bụrụ n’uche n’azụ ya bụ nwanyị di ya nwụrụ, n’aka nri ọ bụ na ọ nọ na mmekọ yana n’aka ekpe ọ pụtara na ọ lụbeghị di.
Nwere ike iyi sọks na akpụkpọ ụkwụ nwere ikiri ụkwụ sara mbara na buckles. Ọ bụ ezie na e nwere ọtụtụ ndị na-eyi ha oji, nke bụ eziokwu bụ na ha na-eyikarị ụda nke uwe ahụ, ka ha daba. Uwe ndị a na-abụkarị nke linen ma ọ bụ owu nke kachasị dị mma, ọ bụ ezie n'oge a, a na-ejikwa polyester mee ha. Ọ na-abụkarị ụmụ nwanyị na-ebu obere akpa, yana ọla ntị ma ọ bụ olu.
Dị ụdị ndị nwoke
Otu n'ime a na-ahụkarị uwe ndị nwoke ahụ bụ Lederhosen. Okwu a pụtara ogologo ọkpa akpụkpọ anụ, nke ejiri mee ihe dịka narị afọ nke XNUMX iji rụọ ọrụ yana dịka uwe ndị ọzọ si n'ọhịa bụ ndị ghọrọ uwe ọdịnala karịa oge. Enwere ogologo oge atọ mgbe ịzụrụ uwe ogologo ọkpa ahụ. N'elu ikpere, na ikpere na na nkwonkwo ụkwụ. Ndị uwe ogologo ọkpa ahụ nwere ike ịnwe obere akpa n'akuku aka nri ma nwee eriri ndị a na-agbanye n'ụfọdụ oge. A na-eyi ha uwe elu na-acha ọcha ma ọ bụ nke plaid na ụda nkịtị. Tụkwasị na nke a, uwe a na-egosi sọks ikpere ụkwụ a na-akpọ Strumpshosen. The Trantechut bụ okpu ọdịnala nke soro uwe a, nke ejiri mmetụta na-enwe rịbọn na nnukwu mkpọchi ntutu dị ka a ga-asị na ọ bụ ahịhịa.
Nke a bụ aha eji ekwu okwu banyere otu ụdị ejiji, ma ụmụ nwoke ma ụmụ nwanyị. Typicaldị uwe a pụọ na mpaghara Bavarian, nke bụ kpọmkwem ebe ebugharị iji chekwaa ụdị ụdị a.
Ejiji achicha maka umuaka
Alsomụaka na-eyikwa nsụgharị nke ụdị ejiji ndị okenye. Ha na-achakarị mara mma ma na-enye ọtụtụ ụdị iji nwee ọ wearingụ iyi ha. Dika eji eyi akwa ndi a ozo, enwere otutu ndi ozo n’ime ya ka eji eji edozi ezin’ulo nile, site na umuaka nta rue ndi n’eto eto na ndi okenye.
Uwe ejiji na Oktoberfest
Uwe ndị a na-ahụkarị aghọọla ama ụwa ọzọ ekele ndị Oktoberfest. Ndị otu a na-eme na Munich na ọ bụ ihe omume na-eme ka ọtụtụ puku mmadụ gbakọta na nnukwu ebe mgbakọ ebe ndị na-a craụ biya bụ ndị na-akwado. Ọ bụ na ememme a ka a na-ahụkarị nnukwu uwe ndị German. Ọ bụ ihe a na-ahụkarị maka uwe dị elu, na akwa ndị sitere n'okike ma nwee ọganiihu, mana a na-erekwa ụdị ndị dị ọnụ ala taa, yana polyester na ihe ndị dị mfe. Ndị na-eto eto na-eyikarị ụdị dị mkpụmkpụ nke uwe ndị a, ma ụmụ nwanyị ma ụmụ nwoke. Banyere agba, ha na-ahụkarị site na mpaghara, mana mgbe ị na-aga Oktoberfest ọ ga-ekwe omume ịhụ ụdị ụda niile na ngwakọta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Alemania » Dị ejiji ndị Germany